Duulimaadyada tooska ah ee 3 ee Izmir. Balanqaadyada Ku Xidhitaanka Madaarka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirGaadiidka tooska ah ee Izmir 3. Ballanqaadyada la siiyay maddaarka
28 / 08 / 2018 35 Izmir, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
oo muujinaysa in daaweyn awow ee Izmir ee duulimaad toos ah in Turkey hoteelada Federation (TUROFED) Guddoomiye Ku-xigeenka Mehmet Affairs, waayo, iyaga saddexaad la siiyaa ballan garoomada ka dhigay in Istanbul ay Turkish Airlines (THY) ayaa sheegay in looga hortagi Izmir duulimaad toos ah ku riday. Izzmir Izmir miyuu bixinayaa qiimaha Istanbul? Joler Jobs wuxuu weydiiyay shirkadaha waaweyn ee diyaaradaha inay sameeyaan duulimaadyo toos ah oo toos ah oo ku taga Izmir.
Diyaaradda Air Arabia waxay duullimaadyo ka bilowdey Izmir kuna tagtay Sharjah, Imaaraadka Carabta (UAE) bilowgii July. Duullimaadyada tooska ah waxay si toosa iyo xiriir toos ah ugu sameeyeen Sharjah oo ka duushay garoonka Adnan Menderes badan oo taga magaalooyin badan oo shabakada duulimaadyada UAE ah. Izmir - Sharjah duulimaadyada seddex maalmood usbuucii ayaa sii socon doona sanadka oo dhan ayaa yiri.
Sida laga soo xigtay Egehaber.com'un, Madaxweyne kuxigeenka TÜROFED iyo AEgean Dalxiiska Ganacsiga iyo Xiriirka Deganaanshaha (ETİK) Madaxweynaha Mehmet İşler, ayaa sheegay inay danaynayaan duullimaadyada tooska ah ee ay bilaabeen shirkadda Air Arabia waxayna sheegeen inay u arkeen inay qiimo leeyihiin. Isagoo ku nuuxnuuxsaday inay had iyo jeer u doodaan inay jiri doonaan duullimaad toos ah oo loo tago İzmir oo lagu muujiyo goob kasta, ayuu İşler yiri, “Air Arabia way maqashay codkeena waxayna qaadatay qaab wanaagsan. Ka dib Trabzon, Bodrum, Antalya iyo Istanbul, waxay duullimaadyo toos ah ku tagtay Izmir. ”
Laga soo bilaabo boqolkiiba deganaanshaha 10, duullimaadyada diyaaradaha Air Arabia waxay gaareen boqolkiiba xaddiga deganaanshaha 50, Mehmet İşler wuxuu sheegay in dhagaystayaasha bartilmaameedka Air Arabia ay yihiin socdaalayaal danaynaya jiritaanka caloosha, dukaamaysiga iyo dalxiisyada dhaqanka. Dalxiiska İzmir, duulimaadyada tooska ah ayaa muhiim u ah dhaqaalaha, Turkish Airlines waa inay u tixgelisaa Izmir inay noqoto xarun Isler, ayaa yiri:
Y THY waxay ka taageertaa Istaanbuul inay wadashaqeyntooda duulimaadyo waqti dheer qaaddo, iyadoo ku dhawaaqday garoonka diyaaradaha Sabiha Gökçen iyo Atatürk inay yihiin xarumayaal. Laakiin Izmir waxaa wali loola dhaqmaa sidii wiil-tallaabo ah. Waxaan dhahnay in THY ay dhab ahaantii qaadi doonto İzmir ajandeheeda duullimaadyada tooska ah. Balanqaadyada loo sameeyay garoonka diyaaradaha seddexaad ee Istanbul ayaa ka hor istaagaya duullimaadyada tooska ah ee taga Izmir. Waxaan jeclaan laheyn inaan weydiino, Izmir ma wuxuu bixinayaa qiimaha Istanbul? ”
Isagoo hoosta ka xariiqay in İzmir ay tahay magaalo dalxiis oo muhiim u ah cimilada, dabeecadda, taariikhda, dhaqanka, caloosha iyo nolosha ugu muhiimsan, TÜROFED Madaxweyne kuxigeenka ahna gudoomiyaha ETİK Mehmet İşler ayaa yiri “İzmir kama helo dalxiiska u qalma dalxiiska uu u qalmo”. Ler wuxuu difaacay in İzmir, oo leh awood weyn marka loo eego kala duwanaanshaha dalxiiska, in si ku-meelgaar ah loo aqoonsan yahay oo aan loo dallacsiin. Xayeysiinta badan micnaheedu waa dalxiisayaal badan. Haa, shaqooyinka qaar ayaa la qabanayaa, laakiin taasi kuma filna. ”
Mehmet İşler wuxuu ku nuuxnuuxsaday in İzmir in badan lagu soo bandhigi karo qorshe istiraatiiji ah, Mehmet İşler wuxuu intaas ku daray in shirkadaha kale ee muhiimka ah ay tahay inay duullimaadyo toos ah geeya İzmir.
Isha: waxaan www.egehaber.co
Duulimaad toos ah oo u socda Ankara oo ka socda Ankara iyo Izmir
Gaadiidka Tareenka waxaa looga hortagi karaa xaafadda Çamlıtepe ee Batman
Russia iyo Turkey dambiilood widths rail kala duwan ee Volume Kordhi Ganacsiga
Shaqo bilaabay link tareenka si toos ah u Turkey-Ciraaq
Tareenka weelka, kaas oo si toos ah ugu xiraya warshadaha magaalada Ankara badda, waa wejiga dhoofiyaha…
Tareenada tooska ah ee Berlin ka bilaabanaya Hannover iyo Frankfurta
Gaadiidka tooska ah ee tooska ah ee ka yimaada Shiinaha ilaa Spain
Xiriirka tooska ah ee Shiinaha ilaa London
Turkey hoteelada Federation